Black wolf: Gómez-Jurado ọhụrụ na-akpali akpali na nke miri emi akwụkwọ akụkọ | Akwụkwọ dị ugbu a
John Ortiz | 21/11/2021 17:22 | Ndị edemede, Novela, Black akwụkwọ
Nkwupụta nke Juan Gómez-Jurado.
Nwa nkita (2019) bụ akwụkwọ akụkọ nke itoolu nke onye ode akwụkwọ Spain Juan Gómez-Jurado na nkeji nke abụọ gosipụtara onye nyocha Antonia Scott dị ka onye isi agwa. Akwụkwọ abụọ ndị ọzọ nke onye nyocha ahụ a kpọtụrụ aha na onye ọrụ ibe ya, Inspector Jon Gutiérrez, nọ. Uhie Nwanyị (2018) na Onye ocha (2020).
Trilogy a tụgharịrị onye ode akwụkwọ Madrid ka ọ bụrụ otu n'ime ndị ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama mpụ na Spanish taa.. Ọ bụ subgenre edemede nke na-ewu ewu nke ukwuu, ekele - ewezuga Gómez-Jurado n'onwe ya - nye akwụkwọ akụkọ ama ama nke Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi na Carmen Mola, maka ikwu okwu ole na ole.
1 Onye edemede na akwụkwọ akụkọ ya
2 Nwa wolf nyocha
2.1 Atụmatụ na ndị isi agwa
3 Nnabata dị mkpa
3.1 Akwụkwọ akụkọ mpụ ọ bụ subgenre nke ụmụ nwanyị na-achị?
4.1 Ọrụ pụtara ìhè na magazin, redio na telivishọn
4.1.1 Ọrụ kacha ọhụrụ
4.2 Ọrụ edere
4.2.1 Ndepụta akwụkwọ akụkọ ya zuru ezu
Onye edemede na akwụkwọ akụkọ ya
Gómez-Jurado arịọla ka a ghara ibipụta nlele mbụ ma ọ bụ nkọwa gbasara ọdịnaya nke akwụkwọ akụkọ ya na mgbasa ozi. Ya mere, mgbalị ọ bụla na nchịkọta akụkọ na-emegide arịrịọ ahụ. Otú ọ dị, ee enwere ike ịkọwa ya Nwa nkita dị ka onye na-akpali akpali, agwa na-akpali akpali nke nwere omimi mmụọ dị mkpa nke ezigbo akụkọ nchọpụta.
Na mgbakwunye, onye edemede Madrid na-agbakwụnye obere doses mgbe niile Mas, ọ bụghị oke - nke ọchị nke jikọtara n'ụzọ zuru oke na mkpamkpa niile dị na ederede. Eleghị anya ihe ọchị na ọchị dị n'etiti atụmatụ ahụ na-anọchi anya mmetụ mbụ nke akụkọ mmadụ atọ siri ike.
Nyocha nke Nwa nkita
Atụmatụ na ndị isi agwa
Eriri akụkọ ahụ na-agba gburugburu nyocha nke onye nyocha Antonia Scott na onye otu ya Jon Gutiérrez mere.. Duo a, n'agbanyeghị na ọ nwere ụdị mmadụ na-emegide onwe ya, bụ ngwakọta dị irè nke ukwuu ma a bịa n'ịkwado igbu ọchụ siri ike. N'otu aka ahụ, ọ bụ obere nwanyị toro ogologo ma buru ibu na mkpebi siri ike, ọ naghị atụ onye ọ bụla egwu.
Kama, ọ bụ nwoke Basque nwere nnukwu anụ ahụ na àgwà ọma. Na mmalite nke akwụkwọ ahụ, ihe omume ahụ na-aga ebe abụọ. N'otu akụkụ, a chọpụtala ozu n'osimiri Manzanares (Madrid). N'otu aka ahụ, na Malaga, e gburu otu nwanyị n'ime ụlọ ahịa. Ihe a ma ama nke ikpeazụ bụ na, o doro anya na onye ahụ nwụrụ anwụ bụ ndị mafia Russia lekwasịrị anya.
Onye na-akọ ihe niile na-arụ ọrụ Juan Gómez-Jurado na-eme ka onye na-agụ ya tinye onwe ya n'ọnọdụ ndị nwere ahụmahụ. Ụdị akụkọ a na-enye anyị ohere ịbanye n'ime uche nke ndị na-eme ihe nkiri: otú ha si eche echiche, ihe kpatara omume ha, mmalite nke mmetụta uche ha ... Ihe a niile na-emepụta ịgụ akwụkwọ nwere ike itinye aka na ibe mbụ.
Tụkwasị na nke ahụ, mkparịta ụka nke akwụkwọ akụkọ ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya na nkọwa nke ọma, nke a na-emecha site na akwụkwọ magburu onwe ya nke onye edemede gosipụtara na ntọala. Na nkwenye, nkọwa ndị omempụ na-akpachapụ anya yana nrụtụ aka na ọrụ nke otu ndị raara onwe ha nye ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ. n'akụkụ osimiri Andalusian.
Nnabata dị mkpa
Nwa nkita Ọ bụ akwụkwọ akụkọ akwadoro ise (kachasị) na kpakpando anọ na Amazon na 61% na 28% nke nyocha, n'otu n'otu. Na mgbakwunye, Ihe ndị a na-ekwu n'elu ikpo okwu ezubere iche na ọnụ ụzọ mbata ndị ọzọ raara nye nkatọ agụmagụ na-ekwu maka akụkọ dị egwu, juputara na obi iru ala na omimi nke uche di egwu.
Akwụkwọ akụkọ mpụ ọ bụ subgenre nke ụmụ nwanyị na-achị?
Arụmụka nke Akwụkwọ mbụ Gómez-Jurado e jiri ha tụnyere nke Dan Brown n'ihi nchikota n'ihe gbasara ịgba izu, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukperechi. N'otu aka ahụ, Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere ijikọ Antonia Scott na ndị na-akwado akwụkwọ akụkọ mpụ Dolores Redondo., Carmen Mola ma ọ bụ Antonio Mecerro, n'etiti ndị ọzọ. (Ha niile bụ ụmụ nwanyị nwere ọgụgụ isi nwere obi ike.)
N'eziokwu, Nwa nkita na-akwado usoro dị ugbu a nke ịga nke ọma nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ mpụ Spanish nwere ndị na-akwado nwanyị nọchitere anya ya. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, agwa ndị dị ka Amaia Salazar (Redondo) ma ọ bụ Elena Blanco (Mola) enwetala ebe pụrụ iche n'etiti ndị na-egwu egwu ndị uwe ojii. N'ezie Scott sokwa na otu ahụ ahọpụtara.
Juan Gómez-Jurado bụ onye Madrid. A mụrụ ya na Disemba 16, 1977. N'isi obodo Spain O nwetara akara ugo mmụta ya na Science Sciences, kpọmkwem na CEU San Pablo University. Ụlọ ọmụmụ ihe nkeonwe bụ ụlọ ọrụ a na-achị n'okpuru ụkpụrụ nke okpukpe Katọlik na nke a na-akpọ Christian humanism.
Echiche nkà mmụta okpukpe nke onye edemede Madrid pụtara ìhè n'akwụkwọ mbụ ya, karịsịa na mpụta akwụkwọ akụkọ ya. Onye nledo Chineke (2006). N'oge ahụ, onye nta akụkọ ahụ arụworị ọrụ maka mgbasa ozi dị iche iche, gụnyere Radio España, Canal + na Cadena COPE.
Ọrụ pụtara ìhè na magazin, redio na telivishọn
Onye edemede Iberia ejikọtala aka na akwụkwọ akụkọ dị iche iche nke mba na nke mba ọzọ. N'etiti ha: Ihe iguru, Jot ala y Akwụkwọ akụkọ New York Times. Ozo, amara nke ọma maka ngosipụta ya na ihe nkiri redio na ihe onyonyo dị iche iche. Otu n'ime ndị kacha ewu ewu bụ akụkụ "Ndị mmadụ" -tinyere Raquel Martos - nke mmemme. Julia na ife nke Onda Cero (2014 - 2018).
N'otu aka ahụ, Gómez-Jurado bụ onye ama ama na ndị na-ege Spanish n'ihi pọdkastị Onye Pụrụ Ime Ihe Niile (ya na Arturo González-Campos, Javier Cansado na Rodrigo Cortés) na Ndị a bụ dragọn. Banyere usoro ihe onyonyo, ihe ngosi ha na Ọnụ ego nke AXN na mmemme okpomọkụ maka ndị na-ekiri ihe nkiri cinemascopazo (2017 na 2018).
Ọrụ kacha ọhụrụ
Onye ngosi nke Mgbanwe capacitor na La 2, mmemme nke ọdịnaya akụkọ ihe mere eme-ọdịnala (2021)
Onye na-ede akwụkwọ - ya na nwunye ya, Dr. na Child Psychology Bárbara Montes - nke usoro ntorobịa Amanda Nwa
Na 2021, ọ bịanyere aka na nkwekọrịta Amazon Prime ikpo okwu ka ọ bụrụ onye okike nke ọdịnaya pụrụ iche maka ika ahụ.
Akwụkwọ akụkọ nke abụọ nke Juan Gómez-Jurado, Nkwekọrịta na chi (2007), nọchitere anya akwụkwọ na-edobe nsọ na ọkwa mba na mba ụwa. East kacha ere na-ekerịta ọtụtụ isiokwu na agwa akọwara n'ime ya Onye nledo Chineke. Otú ọ dị, Onye edemede Madrid abụghị naanị ọkachamara na akwụkwọ akụkọ ahụ, dịka o gosipụtara ike okike ya site n'itinye aka na ụdị ndị ọzọ.
Ihe akaebe nke a bụ aha enweghị akụkọ ifo Mgbuchapụ Virginia Tech: Anatomy of a Tortured Mind (2007). N'otu aka ahụ, ebipụtala usoro abụọ nke akwụkwọ ụmụaka na ndị ntorobịa nke ọma, alex nwamba (akwụkwọ ise) na Ndị na-emegharị ahụ (akwụkwọ atọ). Na mgbakwunye na usoro Amanda Nwa, na mwepụta abụọ ruo taa.
Ndepụta akwụkwọ akụkọ ya zuru ezu
Akwụkwọ nke Juan Gómez-Jurado.
Onye nledo Chukwu (2006)
Nkwekọrịta na chi (2007)
Ihe Onye sabo nke Onye sabo (2008)
Akụkọ banyere onye ohi (2012)
Onye ọrịa (2014)
Ihe nzuzo nzuzo nke Mr. White (2015)
Uhie Nwanyị (2018)
Nwa nkita (2019)
Onye ocha (2020).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Nwa nkita
Blacksad. Ihe niile dara, site Juanjo Guarnido na Juan Díaz Canales. Nyochaa
Nazim Hikmet. Ememe ncheta ọmụmụ ya. Egwu